AOI - शेन्ज़ेन Fumax टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
AOI एसएमटी सोल्डरिंग गुणवत्ता जाँच गर्न को एक महत्वपूर्ण QC प्रक्रिया हो।
Fumax AOI मा कडा नियन्त्रण छ। सबै १००% बोर्डहरू फूमक्स एसएमटी लाइनमा एओआई मेशीनद्वारा जाँच गरिन्छ।
AOI, स्वचालित अप्टिकल निरीक्षण को पूरा नाम संग, हामी एक उपकरण हो जुन हामीले सर्किट बोर्डहरू पत्ता लगाउन प्रयोग गर्छौं जुन हामी ग्राहकहरूलाई उच्च-गुणवत्ताको साथ प्रदान गर्छौं।
नयाँ उभरते परीक्षण टेक्नोलोजीको रूपमा, एओआईले मुख्यतया सोल्डरिंग र माउन्टि inमा सामना गर्ने सामान्य त्रुटिहरू पत्ता लगाउँदछ जुन उच्च-गति र उच्च-सटीक दृश्य प्रसंस्करण टेक्नोलोजीको आधारमा। मेशिनको कार्य भनेको क्यामेराबाट स्वत: पीसीबी स्क्यान गर्नु, छविहरू स collect्कलन गर्नु र डाटाबेसमा प्यारामिटरहरूसँग तुलना गर्नु हो। छवि प्रसंस्करण पछि, यसले जाँच गरिएका त्रुटिहरूलाई चिन्ह लगाउँदछ र म्यानुअल मर्मतका लागि मनिटरमा प्रदर्शन गर्दछ।
के पत्ता लगाउन सकिन्छ?
१ AOI कहिले प्रयोग गर्ने?
AOI को प्रारम्भिक प्रयोगले राम्रो प्रक्रिया नियन्त्रण प्राप्त गर्न, आगामी विधानसभा चरणहरूमा खराब बोर्डहरू पठाउन रोक्न सक्छ। जसले मर्मत लागत कम गर्दछ, र गैर-मर्मत योग्य सर्किट बोर्डहरू स्क्र्यापिंगबाट बच्दछ।
अन्तिम चरणको रूपमा AOI श्रेणीकरण गर्दै, हामी सबै असेंबली त्रुटिहरू फेला पार्न सक्दछौं जस्तो कि सोल्डर टाँस्ने मुद्रण, कम्पोनेन्ट प्लेसमेन्ट, र रिफ्लो प्रक्रियाहरू, उच्च स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
२ के पत्ता लगाउन सकिन्छ?
त्यहाँ तीन मुख्य आयामहरू छन्:
मनिटरले मर्मतसम्भार कर्मचारीहरुलाई भन्दछ कि बोर्ड सही छ र चिन्ह लगाउनुहोस् जहाँ मर्मत गर्नुपर्छ।
3 हामी किन AOI छनौट गर्छौं?
दृश्य निरीक्षणको साथ तुलनामा, AOI त्रुटि पहिचान सुधार गर्दछ, विशेष गरी ती अधिक जटिल पीसीबी र ठूला उत्पादन खण्डहरूका लागि।
（१） सटीक स्थान: ०००० जति सानो।
Cost २） कम लागत: पीसीबीको पास दर सुधार गर्न।
Inspection） inspection बहु निरीक्षण वस्तुहरू: सहित तर शर्ट सर्किट, भाँचिएको सर्किट, अपर्याप्त सोल्डर, आदिमा सीमित छैन।
Ma） ma प्रोग्रामेबल लाइटिंग: छवि संकोचन बढाउनुहोस्।
-） नेटवर्क सक्षम सफ्टवेयर: डाटा संग्रह र पाठ, छवि, डाटाबेस वा धेरै ढाँचाको संयोजन द्वारा पुनःप्राप्ति।
Feedback） प्रभावकारी प्रतिक्रिया: अर्को निर्माण वा असेंब्ली भन्दा पहिले परिमिति परिमार्जनको सन्दर्भको रूपमा।
।। ICT र AOI बीचको भिन्नता?
CT १） ICT सर्किटको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्सको जाँचको लागि विद्युत गुणहरूमा निर्भर गर्दछ। इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स र सर्किट बोर्डको भौतिक विशेषताहरू वास्तविक वर्तमान, भोल्टेज, र वेभफर्म फ्रिक्वेन्सी द्वारा पत्ता लगाइन्छ।
（२） AOI एक यस्तो उपकरण हो जसले अप्टिकल सिद्धान्तको आधारमा सोल्डरिंग उत्पादनमा आम समस्याहरू भेट्टाउँदछ। सर्किट बोर्ड कम्पोनेन्टको उपस्थिति ग्राफिक्स अप्टिकली रूपमा निरीक्षण गरिन्छ। सर्ट सर्किटको न्याय हुन्छ।
।। क्षमता: Se सेटहरू
सारांशमा, एओआई उत्पादन लाइनको अन्त्यबाट बाहिर आउने बोर्डहरूको गुणस्तर जाँच गर्न सक्दछ। यसले उत्पादन लाइन र पीसीबी निर्माण विफलतालाई असर नगरी उत्पादनहरू उच्च गुणवत्ताको छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू र पीसीबीको निरीक्षण गर्न प्रभावकारी र सही भूमिका खेल्दछ।